DAAWO Muuqaal:- Maxay tahay Sababta Ganacsatada Boosaaso saakay ushaqo tagi waayeen? – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ April 3, 2020 ] DAAWO VIDEO:Sir Sababta Itoobiya Airline Somaliland u Joojin Weydey Wiilka U Dhalay Biixi Wakiil U Ah Wariye Bushaaro.	Maqal Iyo Muuqaal
[ April 2, 2020 ] kudhawaad 20qof oo loosoo qabtay Kufsi ka dhacay degmada Afgooye ee Gobolka Sh.Hoose.	Faalloyinka
[ April 2, 2020 ] Siyaasi Sheegay in dagaalka Kismaayo uu yahay mid agu ciribtirayo Beesha Cowramale.	Faalloyinka
[ April 2, 2020 ] DAAWO:- Puntland oo soo saartay jadwal kale oo kusaabsan Imtixaanaadka + Waqti kordhin Fasax ah.	Faalloyinka
[ April 2, 2020 ] Masuul katirsan DFS oo Mushaarkiisa ugu deeqay Gurmadka Turkiga kasocdo isagoo yiri “Iyagaba way na caawiyeen”.	Faalloyinka
HomeFaalloyinkaDAAWO Muuqaal:- Maxay tahay Sababta Ganacsatada Boosaaso saakay ushaqo tagi waayeen?
February 26, 2020 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somali News 2
Qaar kamid ah Ganacsatada Boosaaso oo aanu la hadalnay ayaa waxay inoo sheegeen in ay ka cabanayaa canshuurta iibka, oo dhawaan la soo rogay, taas oo ku jirtay miisaaniyaddii uu ansixiyey Baarlamaanka Puntland.
Wasaaradda Maaliyadda Puntland wali kama hadlin cabashada ganacsatada Boosaaso oo walaac ka muujiyey canshuurta iibka.
Cabashada ganacsatada Boosaaso, ayaa ku soo aadaysa, iyadoo magaalada uu ku sugan yahay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni
Sharci ay saxiixeen Xildhibaanada Somalila oo ay Mooshin ka keeneen Xildhibaanada UK.
Marka aydun maqashaan mise aragtaan dowlad si is daba joog ah canshuuraha sare u qaadeysa waxay taasu caddeyn buuxda u tahay dowlad hoggaanka ku fashilmaysa ee la mid ah nin uu daad qaaday oo xumbo cuskanaya. Astaanta ugu horreysa ee lagu garto weeye dowlad aanu u degsanayn qorshe dhaqaale oo lagu tiirsan karo bal se ceebteeda isku dayaysa in ay ku daboosho canshuuraha oo ay maaliyadda ku camirato.
Tani waxay Puntland ku tahay fadeexad aad u weyn oo muujinaysa qaabka fiiragaabnimada lagu dheehay ee fursadaheeda dhaqaale ee qaaliga ah looga dayacay xaqiiqdii. Sideeda ba labo mabda’ood oo dhaqaale mid ahaantood ayaa aalaa waddamada laga dhaqan galiyaa – (a) kan maalgashiga dowliga iyo (b) kan maalgashiga khaaska ah( aan dowliga ahayn). Kan koowaad dowladda ayaa iyada dakhligeeda waxsoosaarka ku maalgalisa si ay dhaqaalaha u kobciso oo kuna sinto heer ay maalgashiga khaaska ahi xoogeystaan oo ay waxsoosaarka la wareegaan. Kan labaadi waa dowladda oo hab fariidnimo lagu dheehay maalgashiga khaaska ah u fududaysa siyaabihii ay fursadaha jira uga faa’iideysan lahaayeen oo ay waxsoosaarka iyo dhaqaalaha matoorka ugu noqon lahaayeen.
Anigu waxaan ka tirsanahay dadka mabda’a dhexe ku taagan oo ah iskaashi labada daraf ka dhexeeya ee ay dowladdu horseed ka tahay. Puntland si xun ayay u gabtay iskaashi dhaqaale ee ay maalqabeennada u dhashay iyo dowladdeedu isugu gacan saartaan maalgashi xooggan oo waxsoosaar tayo leh iyo dhaqaale dararan lagu kasbado. Canshuurahan ganacsatada lagu dallicinayo fashilkaas ma dadi doonaan ee ama dhaqaalaha ayay qummaati u curyaamin doonaan ama haddii kale burbur dhaqaale ee aan dhakhso looga soo kabanin ayay sababi doonaan.
DAAWO VIDEO:Sir Sababta Itoobiya Airline Somaliland u Joojin Weydey Wiilka U Dhalay Biixi Wakiil U Ah Wariye Bushaaro.
DAAWO:- Puntland oo soo saartay jadwal kale oo kusaabsan Imtixaanaadka + Waqti kordhin Fasax ah.
DAAWO VIDEO:Hees Yaab leh oo Looqaaday Xanuunka Coroonavirus Isla Markaasina Dhaanto Ah Axmed Budul
DAAWO VIDEO:Xog Cusub Madax Ka Faaiday Fayraska Karoona Iyo Somaliya oo Ka mid Ah.
DAAWO VIDEO:Been Hadaad Sheegayso Sidanaa Been Loo Sheega”Maxamed Xaaji Ingriis”Xasuuqi Somaliland Ayaan Buug ka Qorayaa”
War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Puntland, ayaa mar kale lagu go’aamiyay, in dhammaan Goobaha Waxbarashada Puntland ay sii xirnaadaan mudda laba todobaad ah oo ku [Read More]
DAAWO:- MD Karaash oo Dardaaran Dhaxalgal ah iyo Balanqaadyo muhiim ah siiyay Ciidanka Galayr ee Puntland samaysatay.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan Ciidamada Daraawiishta Puntland oo muddo 6 Bilood ah tababar uga socday xerada Tababarada Ciidamada Daraawiishta [Read More]
Puntland oo wareejisay Dad looga shakiyay Coronavirus “Maxay tahay sababta Galmudug loogu diray dadkaasi?”.
Guddiga ka hortagga faafitaanka Cudurka Coronavirus ee Maamulka Puntland ayaa waxaa ay ku dhawaaqeen in dad laga shakiyey balse la karantiiley ay ku wareejiyeen Maamulka Galmudug. Dadkaan oo gaaraya 7 [Read More]
DAAWO VIDEO Qosol Cali Gurey” Somaliland Waxay Allow Fayska Muqdisho Ku Dhaco,Muqdisho waxay Ledahay Allow Hargeysa Ku Dhaco
Siyaasiga Cali Gurey Ayaa Sheegay Inuusan Garayn waxa Hortaagan Inay Dowlada Faderalka iyo Soomaliland Ka wasa Shaqeeyaan Xanuunka Fayska Caroona. “Coronavirus waxa iska kaashanaya shaqaalihii caafimaadka ee Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda [Read More]
DEG DEG: Deni oo amar adag dul-dhigay Isimadda, Siyaasiinta & Wasiiradda Dhulbahante ee kusugan Garoowe.
Qayb kamid ah Amarkii kasoo baxay Puntland oo ka dhaqan galay Gobollada maamulkaasi.
Dhawaan waxaa amar uu kasoo baxey Maamulka Puntland ,kaas oo ku aadan qorshooyin dhowr ah oo looga hortagayo Cudurka Coronavirus,waxaana amarkaas kamid ah bandow Habeenkii ah oo lagu soo rogayo [Read More]